Zvekuita nemari yedu yatakachengeta paIsita? | Ehupfumi Zvemari
Kunouya nguva yegore, senge Isita, apo chengetedzo yekuchengetedza inofanira kukunda pamusoro pevamwe kufunga. Mupfungwa iyi, kudyara mumisika yemari kunogona kuve chimwe chezvinhu zvine njodzi zvakanyanya paunenge uri pazororo vhiki rino. Asi zvakadaro, kuburikidza nemitsara mishoma yekuita iwe unozowana izvo kana iwe uchidzoka kubva parwendo rwako unogona kuwana mari yakati rebei mupotifoliyo yako.
Kune rimwe divi, Isita inguva yakakodzera yegore yekushandura mari inowanikwa kune zvimwe zvigadzirwa zvemari zvakachengeteka zvine nguva pfupi yekugara. Iwo mazuva mashoma asi mune dzimwe nguva iwe unogona kutora risinganzwisisike kushamisika zvisina kunaka iyo yaunogona kuzozvidemba nayo mumazuva anotevera. Neichi chikonzero, zvinokurudzirwa kuti utore matanho ese ekudzivirira kuitira kuchengetedza mari yako pamusoro pezvimwe zvehunyanzvi.
Uye zvakare, iwe haugone kukanganwa kuti vhiki ino chiitiko mumisika yequity chakadzikira zvakanyanya, ndizvo yakadzikira zvakanyanya kupfuura iyo yese yegore. Nemisika yakavharwa neChishanu neMuvhuro unotevera uye izvi zvinoreva kuti haugone kuita kuti mari ibatsire nenzira yaunoda. Chaizvoizvo nekuda kwechikonzero ichi, kune njodzi yakawanda yekuti kusagadzikana kuchabata mumisika yequity uye pachave nemisiyano mizhinji pakati pemutengo wepamusoro uye wepasi wechikamu. Iko kushamisika kunogona kuve kwakatenderedza chero nguva uye unogona kugumbuka uchinakidzwa nekuzorora kwakakodzera nemhuri yako kana shamwari.
1 Isita: kutengesa zvishoma
2 Dzivisa tsika dzinopesana
3 Sarudza chaizvo mvura mumatura
4 Sarudza kwenguva pfupi dhipoziti
5 Mari dzekutengesa zvachose
6 Kuganhurirwa pane zvigadzirwa zvemari
Isita: kutengesa zvishoma
Iko kushanduka kwemisika yemari kusvika parizvino gore rino kwave kugutsa zvakajeka kune zvido zvevashambadzi vadiki nepakati. Iko kunosarudzwa index yeSpanish equities, iyo Ibex 35, yakaonga kwakatenderedza 6%. Ino inogona kunge iri nguva yakanaka yekunakidzwa nemari inowanikwa kubva panguva ino uye hapana chinhu chiri nani pane kudzikamisa zvinzvimbo zvinoenderana nezvaunotarisira. Une nzira mbiri dzekudyara kuti uite nguva ino. Kune rimwe divi, tengesa ese masheya uye kanganwa nezvemusika wekutengesa kwenguva yakareba.
Iyi sisitimu inokutendera iwe kushandisa aya mazuva ekuzorora nerunyararo rukuru rwepfungwa usingatombonetseke nezve shanduko yemisika yemisika. Paunenge uri kune rimwe divi, iwe unogona zvakare kusarudza chikamu chekutengesa kuitira kuti unogona kuve nemari kusangana nemari yeIsita usingatendeuke kune imwe mari muakaundi yako yekutarisa. Nepo chimwe chikamu chemari yako chichigona kuramba chichiita mari inobatsira kana misika yezvemari ikapindura zvakanaka pamazuva akakosha egore.
Dzivisa tsika dzinopesana
Kana iwe uchizotora zvinzvimbo mumisika yemari usati waenda kuzororo iri Pasika, usagadzise basa iri munzvimbo dzinopesana kana zvikamu zvinogona kukupa kusada panguva ino yegore. Kwemazuva mashoma, zvisina kukodzera kuzviisa panjodzi zvinzvimbo zvakadai. Kana zvisiri, pane kudaro, iwe unofanirwa kusarudza yakasimba uye pamusoro pezvose zvakatsiga masheya emitengo ayo asina kunyatso gadzirisa mitengo yavo. Kunyangwe mukupedzisira iyo purofiti iri kuita kushomeka kana pamwe nil. Ehezve, chakakosha kuchengetedza mari inowanikwa.
Kune rimwe divi, uye mukati meiyi yakasarudzika nzira yekudyara, iwe unogona zvakare kusarudza kuchengetedzwa kwenzvimbo dzino dzivirirwa uye dzinochengetedza yemisika yemari. Semuenzaniso, izvo zvakabatana ne chikafu kana migwagwa mikuru izvo zvinopa chengetedzo huru kune iyo portfolio pamusoro pezvimwe zvakanyanya kufunga zvine hukasha Mumazuva ano ekuzorora, zvazviri ndezvekusawana kukokorodza kukuru mumasevha ako, asi kuti uve nechokwadi chekuti watove nemari. Uye neimwe pfungwa, kusarudza yakachengeteka-nzvimbo yekuchengetedza mumusika wemasheya isarudzo yakanakisa yemazuva ano echirimo.
Sarudza chaizvo mvura mumatura
VeSpanish Stock Exchange vakatengesa huwandu hwemamiriyoni makumi matatu nemazana matanhatu nemakumi masere emamiriyoni emari munaKurume, 34.680% kupfuura muna Kukadzi uye 7,2% pasi pemwedzi mumwe chete wegore rapfuura. Huwandu hwekutaurirana hwakakura ne29,6% ​​zvichienzaniswa naKukadzi, kusvika pamamirioni 12,5, 3,1% pasi paMarch 17,8. Asi mazuva ano, usakahadzika kuti huwandu hwekutaurirana huchaderera zvakanyanya uye nematanho akakosha. Kuti uzo dzivisa chero chero rudzi rwezvishamiso Paunodzoka kubva kuzororo rako reIsita, hapana chinhu chiri nani pane kubvumirana kuchengetedzeka kwemvura kwaunogona kutengesa pasina dambudziko kana zvinhu zvashata mazuva ano.
Uye zvakare, iwe haugone kukanganwa kuti yakanyanya kukosha kukosha kuchakubatsira iwe kugadzirisa zviri nani mutengo wekutengesa kwayo. Nekudaro, iwe uchaita kuti kuvhiya kuve kunobatsira kuburikidza neiyi yakakosha nzira yekudyara. Zvichida, kune chero mamiriro ezvinhu unoda here kushaya mari svondo rinouya uye hauzove nenguva yekutsvaga iyo yakanakisa musika mutengo. Iwe haufanire kuyedza rombo rako kana iwe pakupedzisira wafunga kuisa mari yako panguva ino yegore. Kana zvisiri, iwe unofanirwa kuve wakangwarira zvakanyanya mukufunga kwauchazoita mazuva ano egore.
Sarudza kwenguva pfupi dhipoziti
Pane zvinopesana, iyo yakamisikidzwa mari musika yakachengetedza yakakwira nhanho yechiitiko. Huwandu hwakazara hwakaunganidzwa mumwedzi mitatu yekutanga yegore hwakakura ne88,9%, mushure mekunyoresa kutaurirana kwemamirioni emamiriyoni e38.632 mumwedzi waMarch, 109,9% yakakwira kupfuura iwo iwo mwedzi wa2018.Pfungwa iyi, unogona kutarisana nekudyara uku pasi peshure-yakatarwa-bhangi mutero wemazuva mashoma kwazvo. Pakati pemazuva mana ne4 Iwe une zvakawanda zvigadzirwa zvine izvi hunhu uye neuyo wekuwedzera mukana iwe waunogona kutozviita zvepamhepo online. Nyaradzo kubva kumba kana kubva kunzvimbo yezororo rako iyi Isita.
Chero zvazvingaitika, iwe unowana kudzikira kwakaderera kwazvo semhedzisiro yemutengo unodhura wemari mudunhu reyuro. Izvo zviripo izvozvi pamatanho ari padhuze ne0%. Izvi mukuita zvinoreva kuti kudzoka kwako kusevha kunenge kuri kwakanyanya, asi zvirinani iwe uchawana kuve nemari yakachengeteka uye nekudzoka kudiki kwaungawana panguva ino yegore. Yakazara yekuvachengeta mazuva ano kuti iwe uri kuzopedza zororo nevako vaunoda. Naizvozvo, iri zano rekuchengetedza asi rinokutendera kuti upedze mazuva ano wakadzikama.
Mari dzekutengesa zvachose
Muchikamu cheExchange Traded Funds, chinonyanya kuzivikanwa seEFF, huwandu hwemamirioni e137,8 hwakatengeswa, 8,7% kupfuura muna Kukadzi uye 38,6% kuderera pane munaKurume 2018. Huwandu hwekutaurirana hwaive hwe5.381, zvinoreva kuwedzera kwe16,3. % zvichienzaniswa nemwedzi wapfuura uye kuderera kwe34,2% zvichienzaniswa naMarch 2018. Inoita imwe sarudzo yemazuva ano kana pfungwa yako yekutanga iri wedzera nguva yekugara yemari. Nerubatsiro rwekugona kusarudza ese ari maviri mari yakatarwa uye misika yequity. Kana kunyangwe kubva kune mamwe mamodheru ausina kumbobvira waverenga kuti uwane kudzoka pane kuchengetedza.
Inogona kunge iri nguva yekuita iri zano mukudyara zvine hukasha. Kuva chigadzirwa, kuchinjana-kutengeswa mari, inova sanganisa pakati pekutenga nekutengesa masheya pamusika wemasheya nemari yekudyidzana. Asi mune chero zviitiko zvacho, nemakomisheni akawanda anokwikwidza kupfuura mune izvi zvigadzirwa zvemari. Nepo pane izvo zvinopesana, zvinokupa iwe mukana wekugadzirisa misika yezvemari zvisati zvamboongororwa pane kwako chikamu. Kunyangwe iwe uchifanira kuzvichengeta muchikwama chako kwemamwe mazuva mazhinji.
Kuganhurirwa pane zvigadzirwa zvemari
Kunyangwe paine chokwadi chekuti misika yezvemari inowedzera kutengeserana ne2,7% mukota yekutanga yegore zvichienzaniswa nenguva imwechete yegore ra2018, hausi iwo muenzaniso wakanaka kwazvo wekuhaya chaizvo mumazuva ano echirimo. Hazvishamisi kuti, ivo vane njodzi yakawandisa yekuti haugone kuwana vhiki ino yezororo. Just pasi pekushanda chaiko uye kuti iwe unogona kudzora kubva ikozvino zvichienda mberi. Usakanganwa kuti unogona kurasikirwa nechakanaka chikamu chemari yakaiswa mari. Unenge watove nedzimwe nguva dzegore kugadzira chigadzirwa chemhando idzi, asi kwete panguva ino chaiyo.
Uye zvakare, ichave iri njodzi isingakoshi kuitira kuti mumazuva ano ezororo nekuzorora iwe ugone kunyatso kuziva nezve shanduko yezvinzvimbo izvi mumisika yemari. Kusvika padanho rekusvika pamhedziso yekuti hazvina basa kuti uzviratidze nenzira iyi kune izvo zvigadzirwa zvemari. Haisi nguva yakanakisa kutora kana kuvhura zvinzvimbo kuburikidza nemhando dzekudyara dzine njodzi yakadai seiyi. Unenge watove nedzimwe nguva dzegore kugadzira chigadzirwa chemhando idzi, asi kwete panguva ino chaiyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Bolsa » Zvekuita nemari yedu yatakachengeta paIsita?